Ny mpitsikera Greta Thunberg dia mpivadika ara-pitondran-tena amin'ny resaka ara-pitondran-tena amin'ny tsy firaisana ara-pitondran-tena: famarana ny antony: Martin Vrijland
Ny tantara Greta Thunberg dia lasa mazava kokoa sy mazava kokoa fomba iray hanafoanana ny karazan-tsikera rehetra noho ny antony, fa noho ny fahatsapana an-tsinay. Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia nandefa hafatra tamin'ny takelaka Facebook manokana aho ary nampahafantarina fa lavitra ny fetran'ny mety ekena ny fanoratako. Ary izany ihany no ampahany tamin'ny valin-teny, izay azoko haingana kokoa noho ilay olona afaka nijery ilay horonan-tsary narotsako avokoa. Io horonantsary nataon'i David Icke io, izay nanazavany mazava tsara fa ny fisehoan'ny toetrandro dia toa namboarina izy io, dia mazava fa tsy mendrika jerena. Ary io no fiantraikan'ny Greta Thunberg. Ny hafatra ambanin'ny lohahevitra dia "Tsy manana fotoana hifanakalozan-dresaka intsony izahay ary ny mpitsikera dia fihetsiketsika maloto ara-pitondran-tena amin'ny banky tsy tia namana'
Ny lahatsoratra napetrako tamin'ny lahatsary Icke dia mifandraika amin'i David tenany ihany koa, ary toa ny ampahan'ny drafitra rehetra ny tsy handrenesana tsikera tsara azy intsony, fa ny handoro azy ho 'mahitsy' sy 'mampidi-doza', tsy misy atiny mihitsy aza. mba mihaino. Ny "antony" sy ny "tsikera manohana" dia voatohina ho "tsy marina ara-politika" sy "mampidi-doza". Mety tsy hitranga amin'ny antony sy ny antony fotsiny izany. Manomboka izao dia eo daholo ny resaka 'henoy izay nolazaina anao'ary ny tanora mandrahona ny famongorana amin'ny alàlan'ny fiakaran'ny hafanana, dia efa manomboka izao. Ity ambany ity ny lahatsoratra napetrako tamin'ny lahatsary nataon'i David Icke:
Ianao no hitarika ny fiovan'ny toetr'andro. Saingy mazava ho azy fa tsy tokony hihaino azy ianao, satria maniry (Anglisy ho: natsangana tsara ho 'marika') mba hampifamatorana ireo 'idioka tsikombakomba ankavanana' izay azo omena tsiny noho ny tsy fahombiazan'ny Brexit sy ny fahaverezan'ny toekarena noho ny ady ara-barotra. ; olona izay mino fa ny repitily dia mifehy an'izao tontolo izao. Ny lainga tsy tapaka dia nodorana amin'ny zavatra izay fady tsy feno, ka tsy mihaino izany intsony isika.
Ny PsyOp mafanafana maneran-tany dia mihodina manodidina ny fampidirana ny fitantanana sy ny fifehezana ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao amin'ny alàlan'ny famoronana olana manerantany mba handraisantsika ny vahaolana izay tsy ekentsika mihitsy. Ny hifantohan'ireo taranaka tanora indrindra no ifantohany, satria tsy mahalala ny teknika fampielezan-kevitra (toy ny ankamaroan'ny olon-dehibe, amin'ny alàlan'ny fomba).
Ny fisalasalana momba ny 'fifamonoana manerantany' dia mifandray amin'i Donald Trump sy Boris Johnson. Raha avelanao hianjera ny toekarena avy eo ary apetrakao eo amin'ny kiraron'ireto gadona havanana ireto, dia niatrika fisalasalana tao amin'ny 1x ianao. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny 'tsikera' amin'ny marika vita am-pitandremana ankavanana (manohitra ny globalisma, ny fiovan'ny toetr'andro, ny nasionalista, misogynistic ary ireo teorista mpiray tsikombakomba) azonao atao ny mampahatezitra ny rehetra amin'ity marika elatra havanana ity raha potika ny toekarena. Izay no fomba mora sy mahomby indrindra hamotehana ny fitsikerana amin'ny fotoana lava. Amin'ny alàlan'ny famolavolana izany.
Ny antony iatrehanay ireo ankolafy mpanohitra voafehy izay nahasarika olona maro dia satria natosiky ny sain'ireo fampahalalam-baovao mahazatra izy ireo (toa an'i David Icke, Alex Jones sy ny maro hafa) dia satria tsy maintsy mifandray amin'io marika "havanana" ("elatra havanana" amin'ny teny anglisy). Ary ankehitriny efa tonga teo amin'ny sehatra isika fa ity marika ity dia tsy maintsy atao stigmatized 'mety' ka mampidi-doza. Tsy misy ifandraisany intsony ny endrik'aina rehetra: "mampidi-doza ny mpitsikera". Izany no fandaharana izay ambarantsika mivantana izao, miaraka amin'i Greta Thunberg amin'ny anjara toerana.
Ny fanitsakitsahana lahy sy ny zaza tsy tia namana dia mihetsika an-dry Robert Jensen, mpanohitra mpanohitra mifehy, izay milaza ao amin'ny lahatsary eto ambany fa aleony hanipy an'i Greta amin'ireo satrony eo ambonin'ny lohany. Tena mieritreritra ve ianao fa io mpisolelaka antsoina hoe mpikomy io no miteny izany? Tsia, mifikitra amin'ny «demografika» tsara sy voadinika tsara.
Ny andraikitry ny ankabeazan'ireo mpanohitra voafehy rehetra avy any Icke mankany Jensen dia ny ahafahan'izy ireo manambara fahamarinana marobe. Efa tonga teo amin'ilay dingana efa nomanina isika fa tsy hisy dikany intsony io fahamarinana io. Greta Thunberg dia hiatrika io karazana karazan'ny gidro io efa be testosterone. Ny faran'ny faran'ny olona amin'ny karazana dia hita maso. I Donald Trump sy i Boris Johnson dia navela hanatanteraka ny fihetsik'izy ireo amin'ity script ity eo amin'ny sehatra ara-politika iraisam-pirenena ho an'ny lelan'ny fakantsary fampielezankevitra. Io no vokatry ny marika voamboarina tsara eo amin'ny ankavanana ('ankavanana' amin'ny teny anglisy): ny marina dia mifandray amin'ny marika eo ankavanana ary avy eo dia alefa any amin'ny lavaka fantsom-piaraha-monina.
Ilay lehilahy matetika ma macho kely na tsy naman'ny vehivavy (jereo raharaha Trump en Johnson), mino ny firaisana tsikombakomba, dia tia tanindrazana sy "tanindrazana aloha". Izy ireo dia anti-globalista ary tsy mino ny famoronana nataon'olombelona. Izay no mahatonga ny fahantrana ara-toekarena rehetra satria tsy maintsy mitsikera mafy sy mafy loha raha ilaina izany. Ny mitsikera sy be fisalasalana dia zavatra iray amin'ireo biby mampidi-doza antsoina hoe 'olombelona'. Tsy mila mihaino izany intsony isika amin'ny ho avy. Hanomboka amin'ny 'menatra mahamenatra' isika. Manomboka izao dia handray ny geta Greta Thunberg (jereo ny sary miaraka amin'ny lahatsoratra) ireo lehilahy ireo:Manao ahoana re ianao!"
Hita eo ihany ny fiafaran'ny lahateny. Izahay dia mitory ny fampielezan-kevitra fampielezankevitra namboarina eran'izao tontolo izao, izay navela hanana marika eo amin'ny fahefana ara-politika ny marika eo ankavanana ary handray andraikitra, ary avy eo mandamina izany. Izany dia manala tanteraka ny lalana mankany amin'ny tsimoka farany mankany amin'ny fitondram-panjakan'izao tontolo izao, izay tsy hohenoina intsony ny mpitsikera ary hanjavona any amin'ny gulag.
Lisitry ny rohy loharano: trouw.nl, thetimes.co.uk, smh.com.au
Tags: 17, Boris, mpanao tsikera, Donal, Featured, maneran-, Greta Thunberg, fanambakana, Jensen, Johnson, tsikera, potcast, psyop, Robert, scamm, be fisalasalana, Trump, fiakaran'ny maripanan'ny
30 Septambra 2019 ao amin'ny 11: 16
Inona no dikan'ilay hoe mahatonga zavatra ara-pihetseham-po ianao, tsy maninona?
Tsy misy maharatsy raha mampientam-po ny zavatra ianao, hoy ny manaparitaka ny fampielezankevitra eran-tany
30 Septambra 2019 ao amin'ny 11: 34
Jereo ihany koa ity lahatsoratra ity amin'ny tsy fivadihana miaraka amin'ilay lohateny: "Mifanaraka amin'ny fankahalana ny vehivavy ny fisalasalana amin'ny toetr'andro"
30 Septambra 2019 ao amin'ny 14: 53
mila omena azy ireo izy ireo, nanangana azy ireo tsara amin'ny sehatra izy ireo. Milahatra araka ny script ny zava-drehetra ...
30 Septambra 2019 ao amin'ny 18: 51
Saika izany rehetra izany dia araka ny teknikan'i Delphi
Ny teknikan'ny Delphi (ne) mba hampandehanana ireo olom-pirenena ho an'ny fiaraha-mientana efa nomanin'ireo elite. Matetika dia mirakitra fandaharana vaovao na torolàlana tian'ny governemanta handeha, fa mitaky ny hividianan'ny olom-pirenena. Ny teknika manokana dia natao manokana hamaha sy hanidy ny feon'ny mpanohitra, mazàna amin'ny alàlan'ny fisarahana ny tsy fitovian-kevitra ary ny soso-kevitry ny mpanohitra dia lozabe, tsy manana fiaraha-miory, na miabo fotsiny. Ny governemanta eo an-toerana matetika dia manakarama orinasa mpanolo-tsaina izay voaofana ao amin'ity teknika ity ireo mpiasa na tonga amin'ny fehin-kevitra efa azon'ny governemanta tamin'ny fomba izay nahatonga ny olom-pirenena hanomboka hihevitra fa io no hevitr'izy ireo fa tsy ny governemanta.
1 Oktobra 2019 ao amin'ny 10: 00
Hizaha valiny 21
Tsy misy resaka madio momba ny 'fiakaran'ny hafanana maneran-tany' izay mety HITANAO IZAY TSY HITANAO VOAFAHANA FAHASOANA NY FAHAFATESANA NY FAHAFATESANA. TSY fanamafisana eran'izao tontolo izao izany fa CLIMATE CONTROLLED. Avy amin'ny hafanana ionospheric, stratospheric aerosol (chemtrails), trillion watt lasers, solika fako avy amin'ny sambo… sns, ny toetrandro dia lasa ary tsy voajanahary intsony. fa izany no marina.
« Andian-tsoratra ho an'ny resaka (TTS) sy holograma toa an'i Microsoft Hololens 2
Ny 'steniôma' deniers 'toetrandro dia mifamatotra amin'ny teha-tsikombakomba na mpitsikilo, havanana amin'ny lafiny havanana ary fahatsapana hozatra »
Total visits: 13.009.599